अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डबीच ‘क्वारेन्टीन फ्री’ हवाई उडान सुचारु « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डबीच आजबाट हवाई उडान सुचारु भएको छ । आज विहान करिब ७ बजे सिड्नीबाट अकल्याण्डका लागि उडान भएको हो । नयाँ प्रावधान अनुसार यसरी न्यूजिल्याण्ड जाने यात्रीहरुले कुनै अनुमति लिनुपर्दैन । साथै उनीहरुले क्वारेन्टीन समेत बस्न पर्दैन ।
यही व्यवस्था न्यूजिल्याण्डबाट अष्ट्रेलिया आउने यात्रीहरुको लागि पनि लागू हुनेछ ।
नयाँ प्रावधानसँगै प्रभावित बनेको अष्ट्रेलियाको पर्यटनका साथै न्यूजिल्याण्डको समेत पर्यटनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । यस्तै दुई देशबीच रहेको जनता जनताबीचको सम्बन्धमा समेत यसले नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरुले कम्तिमा १४ दिन होटल क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बसाईको खर्च समेत आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएका कारण यो निकै महँगो बनेको छ ।
विदेशका नागरिकको के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरु जो न्यूजिल्याण्डमा आउर अष्ट्रेलिया आउन चाहँदा के हुन्छ ? यो प्रश्न यतिबेला धेरैकोमनमा उठको हुनसक्छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार कुनैपनि व्यक्ति जो विदेशबाट अष्ट्रेलिया या न्यूजिल्याण्डमा आएर १४ दिन बसेको र कोभिड १९ कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ भएमा उसलाई यात्रा गर्न दिइनेछ ।